FIZARANA AN’I VATOVAVY FITOVINANY : Tsy fampisaraham-bazana fa lamina amin’ny fitantanan-draharaham-panjakana – Free News
mercredi, 8 décembre 2021 - 11:53
Nahazo tso-drano avy tamin'ireo raiamandreny ara-drazana ny fizarana ny faritra Vatovavy Fitovinany.
Accueil/Politika/FIZARANA AN’I VATOVAVY FITOVINANY : Tsy fampisaraham-bazana fa lamina amin’ny fitantanan-draharaham-panjakana
FIZARANA AN’I VATOVAVY FITOVINANY : Tsy fampisaraham-bazana fa lamina amin’ny fitantanan-draharaham-panjakana
Efa velirano nataon’ny Filoha Rajoelina tao Mananjary ny hananganana ny faritra faha-23 eto Madagasikara, amin’ny alalan’ny fizarana an’i Vatovavy sy Fitovinany. Andalam-pahatanterahana izany ankehitriny, ary vao ny faran’ny herinandro no nisy ny dinika teo amin’ny Filoham-pirenena sy ireo Raiamandreny Ampanjaka, Depiote 06 ary ny Ben'ny tanàna avy any amin’iny faritra iny. Nivoitra nandritra izany fa tsy fampisaraham-bazana no tanjona amin’ny fizarana, fa lamina hanatsarana ny fitantanan-draharaham-panjakana any an-toerana.
Lucien R. 12 octobre 2020
Anisany Faritra midadasika indrindra eto Madagasikara ny Faritra Vatovavy Fitovinany, ao amin’ny tapany atsimo atsinanan’i Madagasikara. Distrika enina no mandrafitra ity faritra ity, ahitana an’i Nosy Varika, Mananjary, Ifanadiana, Ikongo, Vohipeno ary Manakara, izay renivohi-paritra ankehitriny. Olana iraisan’ny vahoaka rehetra any an-toerana ny fahalaviran’ny biraom-panjakana rehetra hikarakara antontan-taratasy, indrindra rehefa tsy maintsy hihazo an’I Manakara. Antony lehibe iray nahatonga ny Filoha Andry Rajoelina nanana ny vina fizarana roa ity Faritra ity. Nanomboka ny sabotsy teo dia nisy ny dinika mahakasika izany vinan’ny Filoha izany niaraka tamin’ireo Raiamandreny Ampanjaka ao anatin’ny Faritra Vatovavy Fitovinany, ny olomboafidy toy ny Depiote sy ny Ben’ny tanàna ary ny vahoaka tao Manakara, natao tao Vinany. Ny tanjon’ny dinidinika dia ny hisian’ny “teny ierana” momba ny fizaram-paritra ho roa an’ny Faritra Vatovavy Fitovinany. Araka ny tolo-kevitry ny Filoha, zaraina Distrika telo isaky ny Faritra ny Faritra iray ka ny Faritra Fitovinany dia ahitana an’Ikongo, Manakara, Vohipeno. Ary ny Faritra Vatovavy kosa dia ahitana an’i Nosy Varika, Ifanadina, Mananjary.
Nandritra ny fandraisam-pitenenany, mialohan’ny dinidinika, nilaza ny Filoha fa fampanantenana nataony tao Mananjary fony izy nanao Fampielezan-kevitra ny fizarana ho roa ny Faritra Vatovavy Fitovinany satria nangataka izany ny vahoaka. “Fizarana momba ny fitantanan-draharaham-panjakana no atao fa tsy fampisaraham-bazana. Tsy mety ny manao zara vilana fa zara mitovy no ilaina mba tsy hisy intsony ny zanak’ikalahafa amin’ny fampandrosoana. Tsy maintsy atao mitovy ny fizarana”, hoy ny Filoha. Tetsy ankilany, rehefa samy nandray fitenenana ireo Raiamandreny Ampanjaka, ireo Depiote miisa 06 ary ny Ben’ny tanàna rehetra ao anatin’ireo Distrika miisa 06 mandrafitra ny Faritra Vatovavy Fitovinany dia manaiky an’io tolo-kevitry ny Filoham-pirenena io. Niray feo izy ireo satria sady mitombona ara-jeografia ny fizarana no mifanaraka amin’ny tantara. Ireo Ampanjaka taranaky Ndrenony efatra mirahalahy avy any Ikongo dia nanaiky an’io tolo-kevitry ny Filoha Rajoelina io, niaraka tamin’ny Ben’ny tanàna ao an-toerana. Teo anatrehan’izany dinidinika izany dia nahazo tsodrano tamin’ireo Ampanjaka, Depiote miisa 06 ao anatin’ny Distrika 06 ary ny Ben’ny tanàna rehetra ny fizaram-paritra ho roa an’ny Vatovavy sy Fitovinany, izay ahitana Distrika miisa 03 isanisany avy.
Kaominina Namorona ho an’I Fitovinany
Omaly alahady, nitohy tao amin’ny Kaominina Namorona ny dinika mahakasika ny fizaram-paritra ao Vatovavy Fitovinany. Ity Kaominina ity izay tafiditra ao anatin’ny distrikan’I Mananjary. Mahakasika izay indrindra, nifantohan’ny dinidinika tao an-toerana ny fangatahan’ireo Raiamandreny Ampanjaka sy ny vahoakan’i Namorona tamin’ny Filoha Andry Rajoelina ny hiarahan’izy ireo amin’ny Faritra Fitovinany rehefa vita tanteraka ny fizarana mamaritra ny Faritra Fitovinany sy Faritra Vatovavy. Ny Depioten’i Norbert voafidy tao Mananjary dia nitsodrano ny fangatahan’i Namorona sy ny Ampanjakany ary ny vahoakany hiaraka amin’i Fitovinany. Tetsy ankilany, ny Filoha Andry Rajoelina dia nanambara fa : “marina ny fangatahanareo satria rehefa dinihina ny saritany dia Manakara no akaiky kokoa an’i Namorona, afaka amboarina ny lalana, ny vahoaka koa dia naneho ny faniriany momba ny fikarakarana taratasim-panjakana fa i Manakara no akaiky, eo koa ny fangatahan’i Ampanjaka hoe : raha hiaraka amin’i Manakara izahay dia amboary ny lalana Ampasimanjeva – Namorona. Velirano no ataontsika, andefasana fitaovana fanamboaran-dalana ny Governora ary amboarina daholo ny lalana rehetra ary atao Laharam-pahamehana ny mampitohy an’i Ampasimanjeva sy Namorona mihazo an’i Manakara”.
FITSARANA AVO MOMBA NY LALAMPANORENANA : Nandray ny asany ireo mpikambana vaovao
FAMPIANARANA TEKNIKA: Mpiadina miisa 40.066 miatrika ny fanadinana hidirana taona voalohany
Angovo mandeha amin’ny herin’ny masoandro : Trano maherin’ny 100.000 no nisitraka tao anatin’ny dimy taona
NOHON’NY FANOHANAN’NY FILOHA… : Hifanandrina amin’ny Ghana ny Barea amin’ny 12 Oktobra
FARITRA VATOVAVY: Fotodrafitrasa maro no efa vita sy andalam-pahavitana ao amin’ny renivohi-paritra